Itoobiya oo La Wareegeysay Maamulka Doorashada Jubbaland. – Shabakadda Amiirnuur
Itoobiya oo La Wareegeysay Maamulka Doorashada Jubbaland.
July 29, 2019 7:47 am by admin Views: 112
Dowladda Itoobiya ayaa billowday iney markan si toos ah ugu lug lahaato doorashada magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland xilli uu khilaaf xooggani ka dhex jiro musharraxiinta iyo hogaamiyaha maamulkaas, Axmad Madoobe.
Qaar kamid ah saxaafadda caalamka ayaa baahisay in wafdi ka socda Itoobiya uu kusoo wajahan yahay magaalada Kismaayo si uu u jaan gooyo hannaanka doorasahda islamarkaana uu u kala xadeeyo dhinacyada uu muranku ka dhaxeeyo.
Saacadihii lasoo dhaafay waxay ciidamada Xabashidu si toos ah ula wareegeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo oo ay markii hore wada joogeen Kenyaatiga iyo ciidan Soomaali ah.
Saraakiisha Itoobiya ayaa waxay sheegeen in aysan garoonka ka dhoofi karin kana soo dagi karin cid aanan iyaga fasax ka heysan.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in Xabashidu doonayaan iney meesha ka saaraan Axmad Madoobe, halka Kenyaatigu daneynayaan in Axmad Madoobe mar kale dib loo doorto.
Markii la dooranayay Axmad Madoobe waxaa la xusuustaa in doorashada ay hagayeen saraakiishii Itoobiyaanka ee Tigreega ahaa kuwaasoo khudbadahooda ku sheegay in Axmad Madoobe ay iyagu fariisiyeen madaxtooyada.
Sidoo kale markii ay isku dheceen Barre Hiiraale iyo Axmad Madoobe islamarkaana ay DF la safnayd Barre, waa tii labada dhinacba looga yeeray Adis-ababa khilaafkoodiina halkaa lagu soo dhameeyay.
Siyaasadda Itoobiya ayaa ku dhisan dan joogto ah, kumana dhisna saaxiib joogto ah. Siyaasiyiintu waxay sheegayaan in dantii ay ku qabtay Axmad Madoobe mid ka weyn ay ku qabto madaxweynaha DF oo afar Dekedood u saxiixay kaasoo ay Axmad Madoobe aad isku khilaafsan yihiin.
Itoobiya ayaa daneeneysa in ay meesha ka saarto Axmad Madoobe oo waayihii lasoo dhaafay diyaarsanayay ciidamo isaga u gaar ah si uu doorashada ugu isticmaalo awood.
Itoobiya ayaa waxaa la xusuustaa iney si toos ah u hagaysay doorashadii maamulka Koofur Galbeed, waxaana la xusuustaa sida ay u bah dileen una jir dileen Mukhtaar Roobow oo saraakiishooda ballan iyo axdi kula galay Xudur iyo Baydhabo.
Axmad Madoobe ayaa waxaa suura gal ah iney Xabashidu marsiiso dariiqii ay marsiiyeen Muqtaar Roobow oo illaa iyo hadda isagoo xanuunsanaya xabsi ku jira.
Sidoo kale khilaafka haatan ka taagan magaalada Dhuusomarreeb ayaa waxaa suura gal ah in ay Xabashidu soo fara galiso haddii uu sii socdo.
Xaaladda Soomaaliya ayaa maanta mareysaa in Xabashidu dhisato maamullada gobollada.